How Do I Tell My Boss I'm Overworked Without Complaining? ﻿
သင်ဟာ ဘာစောမှမတက်ပဲ အလုပ်တွေကို ပိုပြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို မိမိသူဌေးသိအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲ ???
ချိတ်ဆွဲရန်စာတန်း: work job boss career
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်ဝန်ပိချိန်တွေဟာ စိတ်ဖိစီးစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာထက်၊ လုပ်သင့်တာထက်ကို မြောက်မြားစွာပိုမိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေရတာဟာ တကယ်ကို စိတ်ပင်ပန်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတာပါပဲ။ အဲ့လိုတွေဖြစ်လာချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုစောဒကတက်ပိုင်ခွင့် ရှိမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထက်လူကြီးကို ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဝန်ပိနေကြောင်းကို ဘယ်လိုပြောမလဲ။ သင့်ကို အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့လူပျင်းတစ်ယောက်လို့မထင်အောင်၊ အမြဲစောဒကတက်နေတတ်တဲ့လူမျိုးလို့ မထင်အောင် ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာ အရေးကြီးလာပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသင့်တာကတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာပြောဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အဲ့လိုအလုပ်ဝန်ပိတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုး ကြုံလာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံးကတော့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဦးစားမပေးပဲနဲ့ စိတ်အေးအေးထားသင့်ပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ သင့်အနေနဲ့ စိတ်ရှုပ်နေနိုင်ပါတယ်၊ လက်ရှိအလုပ်ကိုလည်း စိတ်ပျက်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်မှာ သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်ထက် အချက်အလက်ကို ဦးစားပေးပြီး စနစ်တကျပြင်ဆင်မှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဝန်ပိနေကြောင်းကို အထက်လူကြီးကို အထိရောက်ဆုံးပြောပြသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ခုခုကို မကျေနပ်စိတ်ဖြစ်လာချိန်မျိုး၊ အခုကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကို စိတ်တိုင်း မကျချိန်မျိုးဆိုရင် စောဒကတက်ချင်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ စောဒကတက်တယ်ဆိုတာ ပြဿနာတစ်ခုကို ပြဿနာအနေနဲ့ပဲမြင်တာမျိုးဖြစ်ပြီး၊ အဲ့ဒီပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဆက်မတွေးမိလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထက်လူကြီးကို စောဒကတက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ့်နည်းလမ်း တချို့ကို ကြိုတင်စဉ်းစားသွားပြီး သူနဲ့အတူ ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ စောဒကတက်ခြင်းမျိုး တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်တာထက် အဆပေါင်းများစွာထိရောက်မှုရှိမှာဖြစ်သလို၊ သင့်ကိုလည်း သင့်အထက်လူကြီးက အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့လူပျင်းတစ်ယောက် စောဒကလာတက်တဲပုံစံမျိုး မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်ဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာ လူတစ်ယောက်ကိုင်တွယ်လုပ်ကိုင်နိုင်တာထက်ပိုမုိုနေပါသလား။ အဲ့လိုဆိုရင် တခြားသူတွေဆီက အကူအညီမျိုးရရင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်လာနိုင်ပါမယ်။
အခုလုပ်ကိုင်နေရတဲ့အလုပ်နဲ့ သင်ရရှိထားတဲ့ လုပ်ငန်းထောက်ကူပစ္စည်းတွေဟာ လုံလောက်မှုရှိပါရဲ့လား။ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အထက်လူကြီးဆီက တောင်းဆိုမှုမျိုးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအလုပ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း မရှိသေးဘူးလို့ထင်ပါသလား။ ဒါဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့အတွက် သင်တန်းသဘောမျိုး၊ သင်ယူမှုပြုလုပ်နိုင်မယ့် လမ်းညွှန်မှုမျိုးတောင်းခံ နိုင်မှာပါ။
ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်မလုပ်ပဲ ပြဿနာကို တိတိကျကျပြောပါ။
General Motors ရဲ့ former CEO, Charles Kettering က တိတိကျကျသိတဲ့ ပြဿနာဟာ တကယ်တော့ တဝက်ဖြေရှင်းပြီးတဲ့ ပြဿနာပါပဲ လို့ပြောဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း ပြဿနာကိုတိတိကျကျ မစဉ်းစားထားပဲ အထက်လူကြီးကိုပြောမယ်ဆိုရင် သင့်အထက်လူကြီးအနေနဲ့လည်း အဖြေရှာရခက်စေမှာပါ။
အမှန်တကယ်လည်း အထက်လူကြီးတိုင်း၊ မန်နေဂျာတိုင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတိုင်းရဲ့ အဖြေကို အလိုလိုသိစေတဲ့ အစွမ်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အခုကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာကို တိတိကျကျမပြောဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်း အဖြေဆိုတာ အလွယ်တကူရလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အခုရုန်းကန်နေရတဲ့ အခြေအနေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို အထက်လူကြီးကို စဉ်းစားခိုင်းတာမျိုးထက်၊ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တိတိကျကျအချက်အလက်မျိုးပြောပြမယ် ဆိုရင် သင့်အထက်လူကြီးအနေနဲ့ နားလည်လွယ်စေမှာဖြစ်သလို၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာလည်း သူ့အတွက် စဉ်းစားရပိုမိုလွယ်ကူစေမှာပါ။
"ကျွန်တော်အခုလုပ်နေရတာတွေက ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေလုပ်တာထက်ကို အရမ်းများနေတယ်..." ဆိုတာမျိုးကို ပြောမယ့်အစား "..ကျွန်တော်အခုတာဝန်ယူထားရတာတွေဟာ များပြားနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့အနေနဲ့ အချိန်ကိုသေချာအသုံးမချနိုင်ပဲ အလုပ်ဝန်ပိသလိုဖြစ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်အခုလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ ရာထူးရဲ့ တာဝန်ယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်.." ဆိုတာမျိုးပြောသင့်ပါတယ်။
အတိတ်ထက် အနာဂတ်ကို စဉ်းစားပါ
အလုပ်ဝန်ပိခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာဟာ တကယ်တော့ သက်တောင့်သက်သာလေးလုပ်ရတာလို့ မယူလိုသင့်ပါဘူး။ သင့်တော်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကို ပြီးစီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းမျိုးပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း အထက်လူကြီးကို စောဒကတက်ချိန်မျိုးမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်မှုကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေးကို ဦးစားပေးတာမျိုးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရမှာဖြစ်သလို၊ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း အလုပ်ဝန်ပိခြင်းမရှိတော့ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူ ထားတဲ့အပိုင်းတွေမှာ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေရရှိအောင် ကြိုးစားပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်- "... ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပရောဂျက်တွေထဲက xxx ပရောဂျက်ကို မလုပ်ပဲနဲ့ တခြားသူတစ်ယောက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိကတာဝန်ဖြစ်တဲ့ yyy ပရောဂျက်ကို အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊ အကောင်းဆုံးရလဒ်မျိုးထွက်ပေါ်အောင် အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာပါ..." အစရှိတာမျိုးပြောဆိုကာ ပြောဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ အလုပ်ရဲ့ ရလဒ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ သင့်ရဲ့စိတ်ကို ပြသနိုင်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အထက်လူကြီးရဲ့ သဘောကျမှုကိုရရှိစေနိုင်မှာဖြစ်သလို၊ သင့်ကိုလည်း လူပျင်းတစ်ယောက်လိုမျိုး၊ အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လိုမျိုးလည်း ထင်မြင်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ဟာ မိမိလုပ်ကိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ကိုင်တတ်သူမျိုးလို့ ထင်မြင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်သလို၊ ကျွန်တော့်တို့ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့လည်း အလုပ်ဝန်ပိခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက် ကောင်းမွန်သော work-life balance ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။